I-powder Raw Fasoracetam (110958-19-5) Abavelisi - Phcoker
I-fasoracetam powder yi-racetam nootropic entsha neyithembisayo ephuhliswa njenge-ADHD yonyango. ...... ..
I-powder Raw Fasoracetam (110958-19-5) ividiyo
I-powder Raw Fasoracetam yinto entsha entsha ye-nootropic ewela ngaphakathi kweklasi ye-nootropics eyaziwa ngokuba yi-racetam. Ziyimvelaphi ye-piracetam, kodwa impembelelo yayo yokucinga ingamandla kunepiracetam. Kwakhona kunxamnye ne-anti-amnesiac kunokuba i-piracetam, kwaye isebenza njengenkqubo ye-nervous stimulant. I powdetam e-Raw Fasoracetam yintlambo ephezulu ye-coline iphakamisa intuthuko kwaye ikhulisa umsebenzi we-nitric oxide synthase kwi-cortex ye-cerebral.
I-powder Raw Fasoracetam (110958-19-5) Suqobo
Igama lemveliso I powdacetam powder
Igama leKhemikhali (5R)-5-(piperidine-1-carbonyl)-2-pyrrolidone;(5R)-5-(piperidine-1-carbonyl)pyrrolidin-2-one;(5R)-5-piperidin-1-ylcarbonylpyrrolidin-2-one;
uhlobo Numama I powdacetam powder
Iqela leziyobisi nootropics
Inani leCAS 110958-19-5
I molecular Fi-ormula C10H16N2O2
I molecular WSibhozo 196.248
IMasaisotopic Mass 196.121 g / mol
Bilisaba Point 456.8 ° C kwi-760 mmHg
umbala Umpu omhlophe okanye omhlophe
Sukufaneleka I-solubility yayo emanzini yi-50mg / ml kwi-25 Celsius.
I powdacetam powder Aukuguquka Ukuphuculwa kweCognitive and Memory
ekrwada Fasoracetam powder (110958-19-5) Inkcazelo
I-Fasoracetam Powder iyinxalenye ye-nootropic kwintsapho ye-racetam ye-nootropics. Iiplanga ziquka iqela elikhulu leemveliso ezihlukeneyo, zonke ziguqulwa ukusuka kumzali we-Piracetam, owafunyanwa kwi-1960s
Ngoku kuphuhliswa njengonyango olungenakuvuselela unyango lwe-ADHD. Izifundo zabantu ezifumanekayo zikarhulumente kwi-fasoracetam zilinganiselwe kodwa zichanekile, ezibonisa ukuba zingaphatha kakuhle uhlobo oluthile lwe-ADHD yobuntwana. Ukufundwa kwezilwanyana kunye nobungqina obusuka kubasebenzisi abonisa ukuba kunokukhuphula imemori, ukuphucula ukulala, ukunciphisa uxhalabo kunye nokuxinezeleka, nokunciphisa iimpawu zokuxoshwa kwezinye iziyobisi.
IFasoracetam powder (110958-19-5) ukusebenza?
Akukho bubungqina obucacileyo malunga nendlela i-fasoracetam ipowder isebenza ngayo ekuphuculeni ukuqonda, nangona kunjalo, kukholelwa ukuba ukulungiswa kwemveliso kunye nokukhululwa kwe-glutamate, i-GABA, kunye ne-acetylcholine, ezintathu ze-neurotransmitters ezibalulekileyo zeengqondo.
I-GABA (B) imigaqo-nkqubo exoxwa ngeenzuzo enye enye indlela yokwenza izibonelelo ezinxulumene noxinzelelo kunye nokuxhalabisa, kodwa kuninzi ulwazi olufunekayo ukuqonda ngokucacileyo ukuba i-fasoracetam isebenza njani malunga nokubunjwa kwememori nokukhuthaza
benefits of Fasoracetam powder (110958-19-5)
Ngamana ungathuthukisa iMemori kunye noCognition jikelele
Unokuxhoma ukuxhalabisa nokuxinezeleka
I-May ingaphambukisa ukuKhutshwa Kwezinye iziyobisi
kucetyiswa Fasoracetam powder (110958-19-5) Isistim
Akukho nani elisezantsi le-fasoracetam kubantu. Ubungqina obunobuncwane bubonisa ukuba amanani amancinci ajikeleze i-10 - 15 mg ngamanani amaninzi kwi-30 - 50 mg ngokukhonza kathathu ngosuku.
Imiphumela of Fasoracetam powder (110958-19-5)
I-fasoracetam powder ibonakala ikhuselekile kwaye ibekezeleke kakuhle xa ithathwa ngokufanelekileyo ngabantu abaphilileyo.
Iziphumo ezibi kakhulu ezichazwe rhoqo zifana nezinye i-nootropics kwintsapho ye-racetam: ukukhathala okunyamekileyo kunye nesikhashana, ukuphazamiseka kwesisu kunye nentloko.
Nangona kunjalo, abanye abasebenzisi baxela ukunciphisa i-libido kunye nokunciphisa ama-orgasms xa bethatha ipoloracetam powder.
Akukho nkcazelo ekhoyo kwiintsebenziswano ezithile phakathi kwe-fasoracetam kunye nezinye iziyobisi, kodwa inokubangela ukuba i-phenibut.